Ahoana ny fomba hijerena ny trosako maimaim-poana sy mora - Cr U00E9Dito
tapakila sakafo any Walmart
maninona ny findaiko tsy mi-charge / iphone
ipad dia disable mifandray amin'ny iTunes
ny iphone 4 tsy andoavako vola
Torohevitra fiarovana momba ny wifi iphone 7
Ahoana ny fomba hijerena maimaimpoana ny trosako
Ahoana ny fomba hijerena ny trosako maimaim-poana. Azonao atao ny manara-maso maimaimpoana ny isa isa anao ao anatin'ny roa minitra. Manan-jo hanana a dika mitovy amin'ny tatitra momba ny trosanao isaky ny 12 volana avy amin'ireo orinasa telo mitatitra trosa manerana ny firenena. Manafatra an-tserasera amin'ny www.novainfo.nl , Tranonkala nomena alalana hahazoana tatitra momba ny crédit maimaim-poana , na miantso 1-877-322-8228 . Mila manome ny anaranao, ny adiresinao, ny laharam-piarovana ara-tsosialy ary ny daty nahaterahanao ianao hanamarinana ny mombamomba anao.
Soa ihany fa mora kokoa noho ny hatramin'izay ny mahita ny isa nomena anao nefa tsy mandoa ny serivisy. Manomboka amin'ny tranokala mpanome mari-bola maimaim-poana ka hatramin'ny orinasan-kara-trosa manome fanavaozana isa isa isam-bolana maimaim-poana, be dia be ny toerana hijerena ny isa anao amin'izao andro izao. Ka ny olana dia tsy ny fomba hijerena ny naotinao, fa ny toerana hanamarinana azy ary raha mahita ny vaovao farany ianao. Ny isa omena maimaim-poana dia havaozina matetika kokoa noho ny hafa, ary ny serivisy ampiarahanao amin'ny isa maimaimpoana dia miovaova ihany koa.
Eto no ahafahanao manamarina maimaimpoana ny naoty azonao:
Naoty nohavaozina ...
Tatitra momba ny trosa maimaimpoana?
Fanaraha-maso ny trosa 24/7
Naotin'ny mpampiasa WalletHub
WalletHub maimaim-poana Isan'andro ENY ENY Kintana 4,8
Credit Sesa aho maimaim-poana Isam-bolana tsy misy ENY Kintana 3.6
Renivohitra voalohany maimaim-poana isan-kerinandro tsy misy ENY Kintana 3,7
Credit Karma maimaim-poana isan-kerinandro ENY ENY Kintana 4.2
Discover maimaim-poana Isam-bolana tsy misy tsy misy Kintana 4.0
Araka ny maimaim-poana Isaky ny 3 volana tsy misy ENY Kintana 4.3
Experian $ 24,99 / volana Isan'andro ENY ENY Kintana 2,5
Equifax $ 19.95 / volana Isan'andro ENY ENY Kintana 4.0
TransUnion 24,95 $ Isan'andro ENY ENY Kintana 3.0
MyFICO.com $ 19.95 / volana Isam-bolana ENY ENY Kintana 4.0
Fanamarihana: ny mpanome tolotra sasany misy serivisy mandray karama dia manolotra fisedrana maimaimpoana. Ho an'ny fahatsorana, tsy ampidirinay ao amin'ny tabilao etsy ambony ireo fampahalalana ireo.
Maninona ianao no tokony hanamarina ny naoty nominao
Tsara foana ny mandinika ireo tombony azo amin'ny fanamarinana ny mari-bola azonao. Ary raha fintinina dia zava-dehibe ny manamarina ny trosanao satria:
Manome anao hevitra tsara momba ny fahaizanao ara-bola amin'ny fanomezana isa isa ho an'ny atin'ny tatitra momba ny trosanao;
Manampy anao hahazo ny carte de crédit tsara indrindra sy ny indram-bola indramina ary mampihena ny mety fandavana azy;
Manamora ny fampitahana ireo vokatra ara-bola, satria ny ankamaroan'ny tolotra dia manome lisitra mari-bola farafahakeliny (ohatra, Tsara, Tsara, Ratsy) ilaina hahafeno fepetra; SY
Milaza aminao ny fomba hijerena akaiky ny tatitra momba ny trosanao. Ny isa ambany kokoa noho ny mety ampoizinao dia saina mena miharihary, angamba manondro hosoka mety hitranga.
Tsy misy fiatraikany amin'ny isa naotinao. Ny fanamarinana ny isa azonao dia miteraka famotopotorana milamina, izay tsy misy fiatraikany amin'ny isa nomenao, mba hahafahanao (sy tokony) hanamarina ny isa azonao matetika araka izay itiavanao azy.
Ary farany, zava-dehibe ny mahatadidy fa saika ny olona rehetra dia manana toerana hanatsarana ny naoty azony. Ary ny isa naoty tsara kokoa dia mety mitentina dolara an'arivony isan-taona. Fanampin'izay, ny fikolokoloana ny isa azonao dia tsy mila mandoa denaria na fotoana betsaka. Noho izany, zahao ireo torohevitra manampy anay hanatsarana ny trosa hanombohana. Ary raha mila torohevitra mifanaraka amin'ny toe-javatra manokana anao ianao dia misorata anarana kaonty WalletHub maimaim-poana hahazoana ny fandinihan-trosa anao manokana. Antony iray hafa hanamarinana ny naotinao amin'ny WalletHub io.
Inona no isa naoty tokony hojerenao?
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala an'io, fa ny tsirairay amintsika dia manana isa isan-karazany maro - mihoatra ny 1.000, amin'ny tombana sasany. Fa ny tena marina dia tsy maninona izay iray nohamarininao, raha toa ka malalaka sy avy amin'ny loharano azo antoka.
Misy antony roa lehibe mahatonga an'io:
Valiny mitovy amin'izany : Nahita ny birao fiarovana ny mpanjifa a Fifandraisana 90% avy amin'ny fisafidianana ireo maodely isa azo isaina indrindra. Ka raha mahazo isa indram-bola avy amin'ny mpamatsy roa samy hafa ianao dia azo inoana fa tena akaiky ireo isa raha tsy mitovy. Ho fanampin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny maodelin'ny naoty dia mety tsy hitovy ny isa naoty satria tsy ny mpampindram-bola rehetra no manao tatitra amin'ireo biraon'ny trosa telo lehibe.
Sarotra ny mahazo isa marina amin'ny mpampindrana - Matetika dia tsy azo atao ny maminavina hoe inona marina ny karazana isa ampiasain'ny mpampindram-bola, indrindra satria maro ireo mpampindrana no manamboatra modely isaina OTC mba hanomezana izay ilain'izy ireo manokana. Ary raha tsy azonao ny karazana isa manokana hampiasain'ny mpampindram-bola anao hanombanana ny fangatahanao dia tsy misy antony tokony hisafidianana azy.
Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny isa isan-karazany sy maodely ao amin'ny lahatsoratray momba ny antony tsy fisian'ny naoty tena izy. Fa izay mendrika azy, ny isa isa WalletHub dia miorina amin'ny maodely VantageScore 3.0. VantageScore 3.0 dia iray amin'ireo karazana isa mazàna indrindra amin'ny mpampindram-bola, ary misy ny mihevitra azy io ho ny isa amin'ny bola maminavina kokoa misy.
Inona no dikan'ny isa naoty?
Ny isa amin'ny trosa dia fampisehoana tarehimarika amin'ny tantaran'ny trosanao. Izy io dia misy singa dimy mifandraika amin'ny lanjany:
Tantaran'ny fandoavam-bola: 35%
Vola trosa: 30%
Halavan'ny tantaram-bola: 15%
Firy ny karazana trosa ampiasaina: 10%
Fanontaniana momba ny kaonty: 10%
Ny mpampindram-bola dia mampiasa ny isa nominao mba hanombanana ny loza mety hitranga aminao; amin'ny ankapobeny, arakaraka ny maha ambony ny isa azonao dia hampidina ny risikao amin'ny mpampindrana.
Hendry ny mangataka tatitra momba ny trosa isaky ny masoivohon'ny tatitra telo momba ny trosa ary mandinika azy ireo tsara, satria mety misy fampahalalana tsy mifanaraka na diso ao aminy. Raha mahatsikaritra hadisoana ianao dia mangataha taratasy fisolokiana ao amin'ny maso ivoho ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nahazoanao ny tatitra nataonao.
Ny andraikitra dia fanalahidy
Ambonin'ny zava-drehetra, zava-dehibe ny fampiasana am-pitandremana ny trosa. Ny tantara momba ny trosa tsara sy ny isa naoty tsara dia mety ho ny mahasamihafa ny fahafahanao mividy trano, mividy fiara, na mandoa vola amin'ny oniversite. Ny fitantanana ny tatitra momba ny trosanao dia fomba iray tsara hijanonana amin'ny fifehezana ny volanao ary hahatratra ny tanjonao amin'ny farany.
Anontanio ireo manam-pahaizana: Torohevitra momba ny fizahana trosa
Mora kokoa noho ny hatramin'izay ny manamarina ny isa nominao. Saingy mbola tsy mahavita izany ny olona. Fa maninona Nametraka an'ireto fanontaniana manaraka ireto izahay ho an'ny ekipa manam-pahaizana manokana momba ny fitantanam-bola mba hahitanao sy hahazo ireo torohevitra momba ny fitehirizana vola nefa tsy hanadino ny naotinao. Azonao atao ny mahita ny zavatra nolazain'izy ireo etsy ambany.
Hatraiza ny moramora kokoa ho an'ny olona ny manamarina ny isa azony ankehitriny noho ny tamin'ny 5 ka hatramin'ny 10 taona lasa?
Misy antony ve ny mandoa vola hanamarinana ny isa nominao?
Inona no mahasoa kokoa ny mpanjifa: ny fanavaozana isa isan-andro mifototra amin'ny tatitra momba ny trosa iray na fanavaozana isan-kerinandro mifototra amin'ny tatitry ny masoivoho roa?
Inona no lesoka lehibe indrindra ataon'ny olona rehefa manamarina ny isa azony izy ireo?
Ahoana ny fomba ahazoana isa 100 isa haingana
Ahoana ny fomba fiasa ara-bola?
Manamafy ny trosa amin'ny carte de crédit | Dingana tsotra 4
Tsy misy fampindramam-bola any Etazonia
Ahoana ny fomba ahazoana vola amin'ny carte de crédit?
Ahoana ny fanofana trano tsy misy crédit any Etazonia?